Global Voices teny Malagasy » Torolàlana Asongadina: Torolàlana Momba ny Fanaovan-gazety Firaketana – Fomba Vaovao Fitantaràna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Mey 2012 3:05 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika miora
“Ny fanaovan-gazety firaketana dia ny fahazoana, fitaterana, fikojakojana sy famoahana rakitra ho an'ny tombontsoam-bahoaka.” – Jonathan Stray, mpanao gazety sady manam-pahaizana momba ny solosaina.
Ny Novambra lasa teo, tanatina atrikasa naharitra 48 ora tany amin'ny Fetiben'ny Mozilla  tany Londona, nanomboka niasa ho amin'ilay torolàlana voalohan'ny Fanaovan-gazety Firaketana ireo mpanao gazety sy Mpandrafitra rindram-baiko marobe. Ny tena nifantohana tamin'izany dia ny hananana torolàlana mandeha amin'ny ambaratonga sy mora takarina mikasika ny fanaovan-gazety firaketana satria maro ireo loharano mahasoa ao amin'ny aterineto, nefa tsy voalamina ho amina toerana iray izy ireny. Narindran'ny Foibe Eoropeana ho an'ny Fanaovan-gazety  sy ny Fikambanana Open Knowledge  izany Torolàlan'ny fanaovan-gazety Firaketana  izany.
Tsindrio ny sary raha hijery ny "diaporama".
Nivadika ho tetikasa iraisam-pirenena io tetikasa niandohana io, lasa tetikasa fiaraha-miasa izay ahitana maro amin'ireo mpisolovava ny fanaovan-gazety firaketana sy ireo mpisehatra fanta-daza indrindra – ao anatin'izany ireo avy ao amin'ny Australian Broadcasting Corporation, ny BBC, ny Chicago Tribune, Deutsche Welle, ny The Guardian, ny Financial Times, Helsingin Sanomat, La Nacion, ny New York Times, ProPublica, ny Washington Post, ny Texas Tribune, Verdens Gang, Wales Online, Zeit Online sy maro hafa.
Sary an'ny bilaogy Online Journalism
Natomboka tamin'ny fomba ara-dalàna io Torolàlana io ny 28 Aprily 2012 , tany amin'ny Fetibe Iraisam-pirenen'ny Fanaovan-gazety tany Perugia. Efa afaka sintonina ao amin'ny datajournalismhandbook.org  ny dika voalohan'io Torolàlan'ny Fanaovan-gazety Firaketana io, ary ampiasàna ny Creative Commons Attribution ShareAlike License . Hisy boky sy dika e-book  ihany koa havoakan'ny O’Reilly Media.
Mamaly fanontaniana maro tahaka ny “Inona ny atao hoe Fanaovan-gazety Firaketana? “, “Maninona ny Fanaovan-gazety no Mila Mampiasa Rakitra ” ary “Maninona ny Fanaovan-gazety Firaketana no Manan-danja? ” sy ireo fanontaniana hafa ilay torolàlana. Manasongadina fanadihadiana tranga sy milaza ny fomba fitrandrahana ireo rakitra, fandinihana izany sy fanolorana izany amin'ny alalan'ny tantara izy io.
Friends of Januária , avy any Brazil, tohanan'ny Rising Voices, dia nasongadina tao anatin'ny ampahany fanadihadiana tranga  ao anatin'ilay torolàlana. Io dia maneho ny fomba azon'ny olon-tsotra atao hampiasàna ny angona azo avy amin'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra:
Tsy ilainao akory ny hoe ho ao anaty efitrano lehibe sy malalaka iray miaraka aminà manam-pahaizana marobe raha hampiasa angona ao anaty lahatsoratrao. Taorian'ireo atrikasa roambinifolo, i Soraia sy Alysson, izay samy tsy nanaraka fiofanana ho mpanao gazety, dia samy afaka niasa taminà tantara natosik'ireo angona sady nanoratra vaovao mahaliana mikasika ny teo-javatra iainan-dry zareo ao an-toerana. Fanampin'izany, nasehon'ny lahatsoratr'izy ireo ihany koa fa mahasoa ny rakitra amin'ny maha-rakitra azy na dia amin'ny sehatra kely dia kely aza. Amin'ny teny hafa, dia hoe misy ireo rakitra amin'ny endriny bitika sy tabilao no manan-danja — tsy anaty angona goavana ihany akory.
Ny fanaovan-gazety tarihan'ny rakitra  dia dingan'ny fanaovan-gazety mifototra amin'ny fandinihana sy ny fisafidianana miaraka amina fitaovana manana loharano misokatra – na ‘open source‘, fitambaran-drakitra midadasika, izay afaka tsidihana malalaka ao anaty aterineto. Ny tanjon'ity dingana ity dia ny hitantaran'ny fanaovan-gazety mifototra amin'io rakitra io. Miezaka hanentsina ny hantsana misy eo amin'ny fivoarana mivaingana sy zavatra iray azo hamarinina, azo itokisana, mivaingana sy mora tadidiana izany io fifandraisana eo amin'ny tatitra sy ny lahatsoratra io
Zava-baovao ny Fanaovan-gazety Firaketana ary misy lisitra tsy mitsaha-mitombo mirakitra ireo ohatra azo ampiasàna azy . Manana ilay lisitra iray manontolo  mikasika ireo raki-tantara ny Guardian ary mazava ho azy ilay famoahan'ny fikambanan'ireo mpamboraka ao amin'ny WikiLeaks an'ilay rakitra goavana mikasika ny Afghan War Diary .
Ity vohikala ity  dia natokana hanomezana fahafahana ho an'ireo olona liana hanao dingana voalohany amin'ny fampiasàna ny fanaovan-gazety tarihan'ny rakitra ho aminà tahirina loharano fianarana , anisan'izany ireo hetsika goavana, fitaovana, torolàlana, tafatafa sy fandalinana tranga. Araho ihany koa ny pejy Facebook  sy Twitter  ho an'ireo vaovao tsy tapaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/10/32861/
 Fetiben'ny Mozilla: http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/hacks_and_hackers_gather_to_write_the_first_data_journalism_handbook
 Foibe Eoropeana ho an'ny Fanaovan-gazety: http://www.ejc.net/
 Fikambanana Open Knowledge: http://www.okfn.org/
 Torolàlan'ny fanaovan-gazety Firaketana: http://www.datajournalismhandbook.org/
 Natomboka tamin'ny fomba ara-dalàna io Torolàlana io ny 28 Aprily 2012: http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/the_data_journalism_handbook_is_finally_here
 dika e-book: http://shop.oreilly.com/product/0636920025603.do
 Inona ny atao hoe Fanaovan-gazety Firaketana?: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_0.html
 Maninona ny Fanaovan-gazety no Mila Mampiasa Rakitra: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_1.html
 Maninona ny Fanaovan-gazety Firaketana no Manan-danja?: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_2.html
 nasongadina tao anatin'ny ampahany fanadihadiana tranga: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/case_studies_15.html
 Ny fanaovan-gazety tarihan'ny rakitra: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_driven_journalism
 Manana ilay lisitra iray manontolo: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/27/data-store-office-for-national-statistics
 Ity vohikala ity: http://datadrivenjournalism.net/about